RW Rooble oo buuxinaya kaalintii Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
RW Rooble oo buuxinaya kaalintii Farmaajo
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa dhawaan u ambabaxay dalka Jabuuti si uu uga qeyb galo caleema-saarka Madaxweyne Cismaaciil Cumar Geelle.
MUQDISHO, Soomaaliya – Wafti uu hoggaaminayo Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa galabta ka safray Muqdisho, ayaga oo ku sii jeeda dalka Jabuuti, si ay qeyb kaga noqdaan caleema-saarka Madaxweynaha Jabuuti Cismaaciil Cumar Geelle.
War kooban oo ka soo baxay xaafiiska RW, ayaa lagu yiri, “Ra’iisul Wasaaraha XFS Mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Jabuuti oo uu uga qayb galayo caleemo-saarka Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle”
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa khilaaf in muddo ah soo taagnaa oo kala dhaxeeya Geelle, owgii uga baaqday ka qeyb galka caleema-saarkaan. Wuxuuna u diray Rooble ka qeybgalka caleema-saarka.
Farmaajo, ayaa shalay dib ugu soo laabtay dalka, kadib casuumaad labo cisho ah oo uu ku tagay magaalada Kampala, si uu uga qeyb galo caleema-sarka Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni.
Safarka Rooble ee dalka Jabuuti, wuxuu calaamad cad u yahay halka uu Farmaajo geeyay calaaqaadka ay Soomaaliya la lahayd dalkii ugu dhawaa ee Jabuuti.